ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၃-၅-၂၀၁၄)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ကာတွန်းများ (၃-၅-၂၀၁၄)
ဆုပ်လည်းဆူး ၊ စားလည်းရူး * ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီ *
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဟာ အမှန်အကန် ပြိုင်ရင်လည်း
NLD နဲ. တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို ခွက်ခွက်လန် ရှုံးမယ် ။
အဲဒီအခါ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ မဲခိုးတက်လာတာ ပေါ်လာမယ် ။
၂၀၁၅ မှာ မဲခိုးရင်လည်း နိုင်ငံတကာစောင်.ကြည်.အဖွဲ.တွေက မဲသူခိုး
ဘွဲ. ပေးအုံးမှာ ။
ဒီကြားထဲ တပ်မတော် ၂၅% အမတ် တွေထည်.ရင်လည်း နိုင်ငံတကာက လက်ညှိး
ထိုးမှာ ၊ အာဆီယံ စံ မမီလို. ရှင်းရမှာတွေကလည်းရှိသေး ။
..... ၂၀၁၅ ကိစ အင်တင်တင် လုပ်နေတာ ၊ ကျားမြီးဆွဲ ရမလို ဖြစ်နေတာလည်း
ဆုပ်လည်းဆူး ၊ စားလည်းရူး ဖြစ်နေ ကြံ.ခိုင်ရေး ပါတီပါ ။